Isingeniso kwi-Theism - Inkcazelo ye-Atheism Terms
Ubuxoki bukholelwa ekubeni kukho ubuncinane omnye uthixo - akukho nto, akukho nto. Akuxhomekeke ekubeni bangaphi na oothixo bakholelwa kukho. Akuxhomekeke kwindlela 'oothixo' ichazwa ngayo. Akuxhomekeke kwindlela umKristu efika ngayo kwinkolelo yabo. Akuxhomekeke kwindlela umKristu evikela ngayo inkolelo yabo. Ukuba intsomi imane nje ithetha "ukukholelwa kunkulunkulu," kwaye akukho nto inokuba nzima ukuyiqonda ngenxa yokuba asisoloko sibhekana nobunzima bodwa.
Ukuba inism iyinkolelo kuyo, ngoko i-theist yiyiphi na umntu okholelwa ekubeni kukho unkulunkulu omnye. Bakholelwa kunkulunkulu omnye okanye oothixo abaninzi. Bangakholelwa kunkulunkulu onqumlayo kwindalo yonke okanye oothixo abahlala beenxa zonke. Baye bakholelwa koothixo abasinceda ngokunyanisekileyo okanye kunothixo ongathandekiyo ebantwini. Ukuba uyazi ukuba umntu unobuncwane, awukwazi ukwenza nayiphi na ingcamango ngokuzenzekelayo malunga nokuba nguwuphi na unkulunkulu okanye akafani, ngoko kufuneka ucele. Ngokuqinisekileyo, mhlawumbi abanokwazi, banikwe ukuba ngabaphi abazalwana abangabonakali ngokucacileyo kwiinkcukacha, kodwa kusenokwenzeka ukuba baxelele.
I-Theism ifikile kwiintlobo ezininzi kwiminyaka eyi-millennium: i-monotheism, iintlanga, inzondo, kunye nabanye abaninzi kangangokuba abaninzi abazange bakuve. Ukuqonda ukungafani phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zobuqhinga kuyimfuneko kungekhona nje ukuqonda iinkqubo zonqulo abonakala kuzo, kodwa nokuqonda iintlobo ezahlukeneyo nokuhlukahluka okukhoyo kwi -ism.
Abaninzi babonakala bekholelwa ukuba inkolo kunye ne-theism iphumelela into efanayo, inkolelo yonqulo yonke inkolo kwaye inkolelo yonke inkolo, kodwa loo mpazamo isekelwe kwinani elingaqhelekanga kwizinto zonqulo kunye nobuxoki. Enyanisweni, akuqhelekanga nakubantu abangakholelwa kuThixo ukuba bacinga ukuba inkolo kunye ne-theism zilingana ngokufanayo.
Inyaniso kukuba i-theism inokuhlala ngokuzimela ngaphandle kwenkolo kunye nenkolo inokuhlala ngaphandle kwe -ism.
Ubuqhathaniswa no-Atheism: Umthwalo woBungqina
Iingcamango ' zomthwalo wobungqina ' zibalulekile kwiingxoxo ngenxa yokuba nabani na abanomthwalo wobungqina banobopheleleko 'bokungqina' ngamabango abo ngendlela ethile. Umlinganiselo othile wemithwalo yobungqina (okanye inkxaso nje, kwiimeko ezininzi) ihlala ilala kunye nabani na obango ibango, kungekhona nabani na oyenzekayo ukuva ibango kwaye ngoko ke ngubani ongenakuqala ukukholelwa ukuba ibango liyinyaniso. Ngokwenza oko, oku kuthetha ukuba umthwalo wokuqala wobubungqina uhlala kwi-theist, kungekhona nongakholelwa kuThixo.
Ngaba iTheism iyangqineka?
I-Theism ayithethi kakhulu, ubuncinci kungekhona, kuba ayithethi nantoni na ngaphezu kokukholelwa ukuba kukho ubuncinane omnye uthixo onjani. Kutheni okanye indlela enye inenkolelo enjalo ayifanelekanga kwintetho ye -ism kunokuba kutheni okanye umntu akakholelwa njani kuothixo kubalulekile kwi-definition of atheism. Esinye sezizathu ezibangela ukuba oku kubalulekile ngenxa yokuba kunemiphumo ebalulekileyo kumbuzo wokuba i -ism iyinto engqiqweni okanye engenangqiqo.
Xa inkolelo ithi unqulo lohlobo oluthile lukhona, enye yezinto zokuqala ezingakholelwa kuThixo zimele zibuze "uthini na 'uthixo'?" Emva koko, ngaphandle kokuqonda ukuba yintoni inkolelo ithetha, umntu ongakholelwa kuThixo akanakuqala ukuvavanya ibango.
Ngomqondiso ofanayo, ngaphandle kokuba i-theist icacile malunga noko bathethayo, abakwazi ukuchaza nokukhusela ngokukholelwayo zabo iinkolelo.
Imiyalelo Elishumi: Isiseko somthetho waseMelika?
Inkolo Iyakholelwa Kwizinto Zemvelo
UbuKristu be-Muscular: UbuKristu besilisa kunye nobuKristu obubizwa ngokuba yi-Feminized Christianity
Umyalelo wesithandathu: Hlonipha uYise noMama
Ngaba Ukukholelwa Kukho Kukho Inkolo?
Ngaphakathi kwe-455 eCubic Inch Big Block kwi-General Motors
I-St. Olaf College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Igalari yezithombe zamaNkokheli aseAfrika
Uninzi lweeNyoni eziHlangayo kwiPGA Tournament
Ngaba i-Deoxygenated Human Blood Blue?
Ukudibanisa Ixesha lemiqathango
Ngaba i-CFL Light ibhula ingozi yomlilo?
Ngaba i-Nostradamus yayibikezela ukuphela kwehlabathi ngo-2012?
I-Nassau yeGalofu: Ukuchaza iFomentoment Format and Game Betting